मार्तडी आइसोलेसनमा राखिएको बच्चाको अबस्था चिन्ताजनक - बडिमालिका खबर
बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको आइसोलेसनमा राखिएको बच्चाको अबस्था चिन्ताजनक रहेको उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा अस्पताल बाजुराका प्रमुख डा. रुपचन्द्र बिश्वकर्माले वताएका छन् । उनको अबस्था जटिल बनेपछि अक्सिजन दिएर उपचार भइरहेको छ ।
२ बर्षका उक्क्त बच्चामा पखाला, ज्वरो, श्वासप्रश्वास समस्या बाट ग्रसित रहेका छन, बच्चाको उपचार त गरिरहेका छौ, तर अबस्था भने निकै चिन्ताजनक रहेको चिकित्सकले वताएका छन् । ६ अगाडी उनको परिवार भारत बाट आएका थिए । भारत बाट आएर बुढिगंगा नगरपालिकाको क्वारेनटाइनमा राखिएको थियो, त्यहाँ बच्चा बिरामी भएपछि, अबस्था चिन्ता जनक भएपछि बिहिवार साझ सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको आइसोलेसनमा ल्याइएको थियो ।
बच्चा सँग आइसोलेसनमा उनका आमा र बुवा समेत राखिएको छ । बच्चा भारत बाट आउदै बाटोमा बिरामी भएको आफन्तले जनाएका छन् । धुरालशैन क्वारेनटाइनमा उपचार गरयौ सञ्चो नभएपछि रिफर गरिएको एक स्वास्थ्यकर्मीले बडिमालिका खबरलाई बताएका छन् । बिरामी बच्चा र आमा बुवाको स्वाब संकलन गरेर धनगढि प्रयोगशालमा पठाउने तयारी रहेको डा. बिश्वकर्माले वताएका छन् ।